Ngabe i-FTC Ingena Kanjani Ku-Cash In on Izincomo Zosaziwayo? | Martech Zone
Izexwayiso ezivela kuFederal Trade Commission ithunyelwe, ama-imeyili aqondile angaphezu kwama-90 kubathengisi nakubathonya babo, kufaka phakathi abalingisi nabaculi abanjengoKendall Jenner, u-Emily Ratajkowski, uHailey Baldwin, uSofia Vergara, uLindsay Lohan, uSophia Bush, uZendaya Coleman, uJennifer Lopez, uLuke Bryan noSean Combs.
Sibhalile mayelana ukudalulwa ngaphambili, kepha ngisamangazwe yinani labathonya abangakunaki ukwabelana ngobudlelwano bemali noma bezohwebo abanabo nezinkampani abakhuluma ngazo. Lapho ngine- ukuxhumeka kwempahla nenkampani, ngisebenza ukudalula lobo budlelwano emazingeni ambalwa:
Konke okuqukethwe Ngishicilela, noma ngabe i-tweet noma okuthunyelwe okugcwele, kuzokhulunywa ukuthi bayiklayenti noma ngabe siyinhlangano ebambisana nayo, sabelana ngesikhangiso, noma bangabaxhasi.
Ngaphesheya kwamasayithi wami, Ngabelana ngamagama ezinkampani engisebenza nawo. Uzobona amalogo abaxhasi bami ajikeleza ngezansi.
Ngisho neyami Imigomo Yesevisi ithi ngivame ukukhuluma ngamakhasimende noma ukuthi nginobudlelwano bezimali nokuthi ngiyaziveza. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-TOS ejwayelekile ayihlanganisi imihlahlandlela ye-FTC, noma kunjalo!
Ngizizwa sengathi ngingomunye wabambalwa, noma kunjalo.
Ukudalulwa Okungaqondakali Nokungafihliwe
Lawo magama amabili ayisihluthulelo semihlahlandlela ye-FTC. Kodwa-ke, ngilalela ama-podcast, ngibuka amavidiyo abukhoma, futhi ngifunda izibuyekezo zomphakathi nsuku zonke kubaholi bemboni yezentengiso lapho bengadaluli ngisho nobudlelwano babo obukhokhelwe nabathengisi, izingqungquthela, kanye namakhasimende abo uqobo. Isonto nesonto, bazoxoxa ngokusebenzisa ithuluzi futhi kuvuselele inkampani yalelo thuluzi iklayenti labo. Ngaphandle kokwephula imihlahlandlela ye-FTC ekudaluleni, kuyisicefe kubalaleli babo nasemphakathini.
Akukona lokho kuphela okuphazamisayo, nginezinkampani ezixhumanisa emuva zixhumana nami njalo abafisa ukungikhokhela ukufaka ama-backlink kokuqukethwe kwami ​​futhi abaceli ukudalulwa. Ngihlale ngibabuza ngokusobala empendulweni yami uma bengicela ukuthi ngiphule ngqo imihlahlandlela ye-FTC ekudaluleni. Angikaze ngithole impendulo yokulandelela.
Labo ama-imeyili okuxwayisa athunyelwe evela ku-FTC babeyisixwayiso esidubulayo kuwo wonke umkhakha. Akekho okufanele angakunaki ukuthi bamemezele futhi bakhuthaza ukuthunyelwa kwama-imeyili. Ngeshwa, izexwayiso zibonakala zinganakwa futhi mhlawumbe yisikhathi sokuthi i-FTC yenze izibonelo kubo bobabili osaziwayo, izinkundla zokukhangisa ezinomthelela, kanye nabathengisi abathola izinsizakalo.
Imihlahlandlela ye-FTC's Endorsement Guides ithi uma kukhona 'ukuxhumana kwezinto' phakathi kogunyazayo nomthengisi womkhiqizo - ngamanye amagama, ukuxhumana okungathinta isisindo noma ukwethembeka abathengi abakunikezayo - lokho kuxhumana kufanele kucace futhi kugqame kudalulwe, ngaphandle kokuthi ukuxhumeka sekuvele kucacile kumongo wokuxhumana oqukethe ukugunyazwa. Incwadi ye-FTC ithunyelwe kuMark King, uMongameli we-Adidas Group eNyakatho Melika.
Abadumile be-Instagram Basaphula Izinkombandlela ze-FTC
Eqinisweni, lolu cwaningo kusuka I-Mediakix, inkampani eyakha imikhankaso yokuthonya abantu yangokwezifiso, ikhombisa ukuthi ama-93% wezincomo zemithombo yezokuxhumana ku-Instagram yephula imihlahlandlela ye-FTC:
Tags: abadumileukudalulwaEmily Ratajkowskiukugunyazwaftcftc i-imeyiliIsexwayiso se-ftc imeyiliimihlahlandlela ye-ftcizixwayiso ze-ftcU-Hailey Baldwinithonyaukumaketha kwamathonyainstagramJennifer LopezKendall JennerLindsay LohanULuka Bryanukuxhumeka kwempahlaUSean CombsSofia VergaraSophia BushUZendaya Coleman